Warmly Welcome: သူ့ကြောင့် .. ..
ဟုတ်ရယ်၊ လက်ဖက်ထုတ်တွေ ဈေးကွက်မှာ မတွေ့တော့ဘူး။ ၀ိသမလောဘသား တွေပေါ့နော်။ လဖက်သုတ်ထက် ဂျင်းသုတ်ကို ပိုကြိုက်တယ်။
အကိုပြောမှပဲ ဘာကို ချင့်ချိန်ရမှန်း သိသွားပြီ။ လျှောင့်သင့်တာတွေ လျှော့ရတော့မယ်...း)
ခေါက်ဆွဲခြောက်များများစားရင် ဘာဖြစ်မလဲ ။ အဖြေရှိရင် ကြိုပြောထားအုန်း၊ ဒီမှာတော့ ညမနက် တီးနေတာ.. လဖက်သုပ်တော့ စားချင်တယ်။ ၀ယ်မရလို့ ..။
အစားရှောင်တာ .. ။
ဧေုသု တ ပို့စ်လေး ပါပဲ
အဲ.. စာလုံးပေါင်းကလဲ မှားတာ လွန်တယ်
ဗဟုသုတ ရစေတဲ့ ပို့စ်လေးပါ..
အသိပညာ ပို့စ်လေးပါ ကိုဝင်းဇော်ရေ၊ မိန်းကလေး ပီသစွာ လက်ဖက် မကြိုက်တဲ့ အတွက် တော်သေး၏၊ သေချာမှတ်သွားတယ်နော်
ဟိုက် .... မဖြစ်ဘူး သိရက်နဲ့ မိုက်နေတာ ကြာပြီ အငံလေးတော့ လျော့စားမှ ... ခေတ်မှီမှ ဖြစ်တော့မယ် .... :D ကျေးဇူး Bro ...
ဟုတ်ပါတယ်ကိုဝင်းဇော်ရေ..ရေရှည်ဖြစ်လာမှာထက် လောလောဆယ် ဘာမှမဖြစ်လောက်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ စားနေ နေနေကြတာ..။ အိမ်က ကလေးတွေတောင် ready-made snack ထုပ်လေးတွေ စားလွန်းလို့ ပြန်ထိန်းနေရတယ်..အရသာလည်း မကောင်း အာဟာရမဖြစ်တဲ့ အပြင် ကလေးတွေ စားသင့်တဲ့ အစာမျိုးတွေမှ မဟုတ်တာ..။ သူတို့ကတော့ အရုပ်လေးတွေတို့ ကလေးကြိုက်တွေ မက်လုံးပေးပြီး ဆွယ်ကြတာကိုး။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကလည်း ကိုဝင်းဇော်ရယ်..ဆေးနံ့တွေကို ထောင်းနေတာပဲ။ ..ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။ စိုက်ပျိုးတဲ့သူတွေကိုရော..စီးပွားရေးသမားတွေတင်မကဘူး. စားသုံးသူတွေ..အားလုံးမှာ အသိကိုယ်စီရှိနေမှပဲ..
အစားအသောက်အတွက် သတိထားပြုပြင်ရမဲ့ အချက်တွေ မှတ်သားပါတယ်။ အရင်က ၀က်သားတုတ်ထိုး ဆိုရင် တွေ့မရှောင် စားခဲ့တာ ခုမှ သူ့ ဆိုးကျိုးတွေ ခံစားနေရတယ်။ အစာအိမ် လမ်းကြောင်းမှာ အနာဖြစ်ပြီး စ၀်စံထွန်းရောက် ခဲ့ရ သေးတယ်။ ခုတော့ အစားအသောက်တွေ မသရမ်း တော့ဘူး။ ဖော်ပြပေးလို့ ၀မ်းသာတယ်။
စားသတိ၊ သွားသတိ ဆိုတာ မှန်တယ်
ကလေးတွေအတွက် ရောင်းတဲ့မုန့်တွေ ကိုဝင်းဇော် ပြောသလိုပဲ တခါတလေ စားကြည့်မိတယ်။ ပွယောင်းယောင်း၊ အစပ်ကဲကဲ၊ ငန်ရှရှ နဲ့အရသာ ခံစားရတယ်။ ကလေးက မုန့်ကို စားချင်လို့ ပူဆာတာ မဟုတ်ပဲ မုန့်ထုတ်ထဲက အရုပ်နဲ့ ကံစမ်းမဲ ကိုမက်တာဖြစ်တယ်။ ခက်တာကလဲ ကျောင်းခန်းဝမှာရော ကျောင်းခန်းထဲ အထိရောင်း နေကြတာကြောင့် ရှောင်လွဲလို့ မရနိုင်အောင် ဖြစ်တယ်။ နောက် ကလေးမုန့်တွေကို ဆိုးဆေးများ တယ်လို့ ထင်မိတယ်။ စိတ်ညစ်စရာတွေ ပါပဲ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆင်ခြင်နိုင်အောင် ရေးထားတာမို့ အကျိုးရှိစေ ပါတယ်။
ရယ်ဒီမိတ်တွေ ကို ရှောင်ရတော့မယ်
ဆရာတော် ဥုးသုမင်္ဂလာ ဟောကြားသလို နိုင်ငံခြားမှာ ဗမာတွေနဲ့ တွေ့ရမှာ ရှက်တယ်တဲ့။ အဆင့်အတန်း မရှိလို့တဲ့၊ စိတ်ဓာတ်ညံ့ဖျင်းလို့တဲ့။
သုတ ဗဟုသုတ ပညာပေး စုံလင်တဲ့ ဘလောဂ့်လေးကို ပထမဆုံး လာဖတ်ဖြစ် ပါတယ်။ တိုင်းတပါးမှာ အပျင်းပြေစေဖို့ စာဖတ်ခွင့်ရလို့ ၀မ်းသာတယ်။ ဆက်လက်ရေးသားပါ။ အားပေး ပါတယ်။
လူတိုင်းကျန်းမာစေချင်တဲ့ စေတနာကို လေးစားတယ်။
မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို။
ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပဲ လွေးနေရတယ် ..
တကယ့်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါ..
အရသာမက်တော့ နေ့ စာရောညစာပါ ခက်ရပြီပေါ့။ ဟိုဟာလေးရော ဒီဟာလေးပါရှောင်ရင်းနဲ့ ဘာစားရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး ။
အသိတရားလေးတွေ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ နော် ။
ဗဟုသုတ ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ...
ဘာတွေကို ဘယ်လိုစားရရင်ကောင်းမလဲ လို့စဉ်းစားနေမိတယ်...
ကိုဝင်းဇော် ခုခေတ်ကတော့ တော်၂ဆိုးနေပြီ အစားအသောက်ကြောင့် ဒုက္ခတွေ အများကြီးပဲ မစားလို့လည်းမရတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်စားမှပဲရတော့မယ် ကြောက်စရာကြီးနော်.
ယမ်းစိမ်းများများပါတဲ့ အစားအသောက်တွေ (ငါးခြောက်၊ ကြက်/၀က်အူချောင်း) ဆိုဒီယမ်များများပါတဲ့ အထားခံဗူးတွေ ရှောင်တယ်။ အားကစားလဲလုပ်တယ် ..
အဟိ ၀တတ ဖြစ်နေလို့..
ကွန်မကောင်းလို့ ကသိုက်ကရိုက် လာဖတ်သွားတယ်နော်
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုဝင်းဇော်ရေ့ ..
ဟုတ်တယ်နော် .. ခုက ပြုပြင်ထားတာတွေသိပ်များတယ် .. အရွက်များများစားချင်ရင်တောင် ပိုးသတ်ဆေး ဟိုဆေးဒီဆေးတွေကို ကြောက်ရသေးတယ် ..း(
good knowledge .. ..(()) .. ..
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာက အကိုပြောသလိုဘဲ...လက်ညှိးထိုးမလွဲ အတတ်ပညာပြည့်စုံနေတော့ ခေါင်းရှောင်အရည်အချင်းတွေပြည့်စုံတာပေါ့ဗျာ။
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နေထိုင်မှု၊စားသောက်မှု တွေဟာ တိုးတက်ခေတ်မီနေတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေကို ခြေဖျားတောင်မမီပါဘူးဗျာ၊မတတ်နိုင်ဘူးလေ...။ကိုယ့်အမျိုးကိုယ်သတ် ဒီစစ်တပ်နဲ့ကတော့ တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာ အဘက်ဘက်က လုံးပါးပါးနေမှာအမှန်ပါဘဲ။နောက်နေ့အသက်ရှင်ဘို့ လောက်ပဲ ရပ်တည်နေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဘဝက ဟိုးအနာဂတ်ကာလကို အိပ်မက်မက်ခွင့်မရှိပါဘူးလေ...။
အခုလို အသိတွေမျှဝေတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သတင်းကြားရတာတော့ လက်ဖက်တောင်သူ တွေလဲ အစိုမရောင်းရရင် အခြောက်ပဲ ရောင်းမယ် လုပ်နေတယ်။ သူတို့အတွက်တော့ အရှုံးမရှိပါဘူး။ အမှန်တော့ လက်သည်တရားခံကို ဖော်ထုတ်သင့် တယ်။ တရုပ် မယ်လမင်းကိစ္စတောင် တရားခံ ဖော်နိုင်သေးတာပဲ။ မလုပ်တတ်တာလား၊ မလုပ်ချင် တာလား၊ မလုပ်ဝံ့တာလား၊ မလုပ်နိုင်တာလား တွေးတောစရာပါ။
သေကာမှသေရော ပဲ ဆားတော့ မလျော့နိုင်သေးဘူး
ကျန်တာ ကတော့ လျော့လေကောင်းလေ ပေ့ါ...။
အကိုရေ ကျေးဇူးအထူး သေချာကိုဖတ်သွားတယ်ဗျာ.. ပညာလေးတွေ ရလိုက်တယ် ကျေးဇူး
ဟုတ်တယ်၊ ဆိုးဆေးတွေကြောင့် တော်တော်လေး ဂယက်ရိုက်သွားကြတယ်။ များသောအားဖြင့် မန်းလေးက လဖက်တွေဖြစ်တယ်လေ။
ဖြစ်ခါမှသာဖြစ်တော့ဗျာ စားတာတော့ စားရမှာ
ပဲ။ တတ်နိုင်ဘူးဗျ။ ဟီ..